I-DJ Drops - Ukubala kwe-NYE kwe-Djs, i-Vjs, i-nightclub 2019
Chofoza kumathrekhi ukuze ubuke kuqala, bese ubathandayo, chofoza i-Icon ye-CART ukuze ungeze leyo ithrekhi ekuthengeni kwakho.
(* I-Cart Icon isenhloko ye-SoundCloud ngezansi)
Uma usuthenga amaconsi we-Dj oyifunayo, uzobe usulungele ukulanda okusheshayo. Konke okusha kwe-2018!
Thenga nje ezimbalwa noma uthenge KONKE kusaphulelo esivela ngamathrekhi engeziwe weBhonasi!
UKUKHULULEKA KWAMALINDA - Amadonsa e-106